Ihe ọghọm ụgbọ oloko na Izmir! .. RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirIhe ọghọm ụgbọ okporo ígwè na Izmir! ..
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, Isi akụkọ, Turkey 0
mgbọ agha mberede ụgbọ ala Izmir nke ụgbọ oloko na-ebu
Ihe ọghọm ụgbọ oloko İzmir! .. Site na Alsancak Port, ụgbọ oloko ụgbọ ala nke 7, dọpụrụ n'ụzọ Şehitler Street n'ihi ebumnuche na-enweghị isi. Onweghi mmerụ ahụ na akpaghasị akụkọ ihe mere eme kọrọ.
NUMgbọ okporo ígwè 7 dị na Konak nke Izmir rụrụ arụ. N'ehihie, ezigara n'ọdụ ụgbọ mmiri Izmir gaa Sarayköy district nke Denizli, ụgbọ oloko na-eburu ngwongwo juru na mabri na granite tụfere n'okporo ụzọ Şehitler dị na Ebepınar maka ebughị ihe kpatara ya. N'agbanyeghị na enweghi mmerụ ahụ n'ihe mberede ahụ, enweghị nsogbu ọ bụla maka ụgbọ elu ndị ahụ.
akụkọ banyere ọnọdụ nke engineer lanarịrị mberede ebibighị, na Republic of Turkey State Railways (TCDD) dochie a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkpara na-adabere na omume. Ndị isi TCDD na ndị otu ndị uwe ojii nọ na mpaghara ahụ site na ịme ihe nchebe, butere nyocha banyere ihe mberede ahụ. A kpọrọ onye ọrụ Crane maka ibupu ụgbọ ala ndị ahụ kpụrụ akpụ site na ụgbọ okporo ígwè ahụ.
Eragbọ okporo ightgbọ Okporo Dgbọ Mịrị na Mersin 17 / 09 / 2019 Wgbọala ụgbọ oloko na mpaghara Tarsus nke Mersin merụrụ ebumnuche. Dika ozi enwetara, ufodu ugbochi nke ugbo ala nke Mersin rue Adana ekwetubeghi maka ihe mere ha jiri bia nso na Tarsus Station.
Na-agbawa agbawa mgbe ụgbọ okporo ígwè dị na obodo diyarbakir, a kwaturu ụgbọala 10 27 / 02 / 2017 Mgbapụ n'oge ụzọ ụgbọ oloko ụgbọ mmiri dị na Diyarbakır Surda, ụgbọgharịrị 10 tụgharịrị: Bọmbụ etinyere n'okporo ụzọ ndị ahụ gbawara n'obodo Karpuzlu nke Sur district nke Diyarbakır n'oge ụgbọ oloko ahụ na-aga Batman-Diyarbakır. Bọmbụ gbawara agbawa na ...
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-emepụta na Bulgaria na-akwapụ ma kụọ ụlọ 10 / 12 / 2016 Na Bulgaria, ụgbọ okporo ígwè na-ebu gas mebiri emebi ma kụọ ụlọ: N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Bulgaria, ụgbọ oloko bu mmanụ gas mebiri emebi wee banye n'ime obodo Hitrino. N'ime obodo, opekata mpe ụlọ 20 kụrụ site na mgbawa nke ihe
Ogige 5 nke ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ. 13 / 02 / 2012 5 ụgbọ oloko ụgbọ mmiri na mpaghara Nusaybin nke Mardin mebiri emebi. Dika ozi siri n’aka ndi isi ulo oru Nusaybin, ugbo ala nke 63142 nke ụgbọ ala 5, nke bu ebu site na Gaziantep rue Nusaybin, mebiri emebi n’onu uzo Nusaybin.
Ejiri ụgbọ asatọ nke Ụgbọ okporo ígwè 12 / 12 / 2018 Wgbọ oloko asatọ nke ụgbọ oloko mebiri emebi na 19.00 na ngalaba Makuh-Lundanka nke okporo ụzọ Gorky na mpaghara Kirov, Minista ofgbọ njem Russia kwuru. Ightgbọ oloko asatọ nke 2131 ụgbọ oloko mebiri emebi. Mberede ...
Eragbọ okporo ightgbọ Okporo Dgbọ Mịrị na Mersin
Na-agbawa agbawa mgbe ụgbọ okporo ígwè dị na obodo diyarbakir, a kwaturu ụgbọala 10
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-emepụta na Bulgaria na-akwapụ ma kụọ ụlọ
Ogige 5 nke ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ.
Ejiri ụgbọ asatọ nke Ụgbọ okporo ígwè
Na Kenya, ụgbọ okporo ígwè na-akụ ụgbọ okporo ígwè ahụ ma tie ụlọ
Kiev - Sevastopol ụgbọ okporo ígwè derailed, kwatuo na ụgbọala (Video)
Izmir YHT Ụgbọ njem ụgbọ mmiri Izmir na-akpata mberede Agbanwe Agbanwe
Ụgbọ ala na-ahapụ ụgbọ okporo ígwè ahụ na breeki e wepụtara na Malatya dara n'ime ụgbọ ala ndị na-efu.